Poblacion Makati UkuKhanya-Egcwele iZen Sanctuary Netflx - I-Airbnb
Poblacion Makati UkuKhanya-Egcwele iZen Sanctuary Netflx
Icocekile, ikhuselekile kwaye icocekile indawo yaseMakati entliziyweni yeMetro Manila, kwindawo ene-eclectic kunye nendawo ebumelwaneni.
24/7 ukhuseleko. I-Wifi yasimahla & ekhawulezayo. Umoya ozolileyo, ibhedi enkulu etofotofo. Ikhitshi kunye negumbi lokuhlambela elisanda kulungiswa. Ukukhanya okuguquguqukayo. Wamkelekile neziselo ezibandayo.
Indawo ephangaleleyo evuthuzayo eqaqambileyo yekona ye-1BR enetoni zokukhanya, imbonakalo yesixeko esinepanoramic, impepho enqumlayo enebalcony ye-lanai. Indawo egqibeleleyo ezolileyo yezen.
Ikhaya eliphumlayo, langoku, elixhotyiswe kakuhle kwaye limangalisayo kude nekhaya.
IGUMBI LOKULALA ELINYE:
I-58sqm (625 sqft) indlu enefenitshala yanamhlanje. Ifanelekile kumntu omnye okanye isibini. Inegumbi elinye lokulala elinebhedi etofotofo, igumbi lokuhlambela eli-1, igumbi lokuhlala, ikhitshi elixhotyiswe kakuhle kunye nebalcony ukonwabela iimbono zasebusuku.
Ummandla wonke ufumana itoni yelanga yendalo yonke imini!
Ihlala kumgangatho we-4 wesakhiwo se-boutique condo. I-condo ijonge ngaphezulu kwesibhakabhaka saseRockwell, i-Century City, i-Ortigas nangaphaya kuyo yomibini indawo yokuhlala, igumbi lokulala kunye ne-balcony ye-lanai. Ukubonakala kwezibane zedolophu ebusuku kunye nokukhanya okukhanyayo kwenza indawo efudumeleyo yokumema.
Impepho enqumlayo kuyo yonke iyunithi xa iifestile zivuliwe iyamangalisa ngokwenene.
Iyunithi ibonisa umbane okhawulezayo we-50Mbps WIFI kunye ne-Apple Airport Extreme Router kunye nazo zonke iziteshi ze-HD zeentlobo zoshishino kunye ne-TV aficionados kunye nabathandi bezemidlalo. I-DVR ineemuvi ezirekhodiweyo kwaye ikuvumela ukuba urekhode imiboniso nayo.
Nceda uqhagamshelane nam ukujonga imihla, ndixelele kancinci malunga nawe kunye nohambo lwakho PHAMBI kokuba ucele ukubhukisha. Ikhalenda ichanekile kodwa ndinganxibelelana nezinye iindwendwe.
Iisilingi eziphakamileyo kunye nomgangatho oqaqambileyo wedayimane kwiparquet sisiqalo nje:
- Ibhedi edadayo elingana nobukhulu bokumkanikazi kunye noomatrasi wehotele ongaphezulu komqamelo wamathambo (60"x78" ; 1,5m*1,9m), imiqamelo ethambileyo kunye nesithuthuzeli esikhaphukhaphu.
- Itafile yokutyela eyenziwe ngomthi enezitulo ezine ezihlala ezine.
- Ibhedi emnyama esemgangathweni enemiqamelo.
- Isitulo seklabhu edlamkileyo
- Itafile yekofu kunye neglasi ye-zen eneetafile zokugqibela
- Igumbi lokugcina elinomgangatho wokuxhoma amaplanga.
-Ikhitshi elingenaziphene elinomphezulu wefriji yomgca, isitovu, kunye nehood.
- Ukukhanya kwekhabhathi engaphantsi kokukhanya.
- Iiglasi ezisemgangathweni ezibandakanya iwayini emhlophe, iwayini ebomvu kunye neeglasi ze-whisky ezinomkhenkce owaneleyo kunye namanzi ahluziweyo asimahla.
- Izipili ezibini ezigcweleyo ezenziwe ngamaplanga.
- Ishawari yemvula kwigumbi lokuhlambela.
-Isefu ye-Honeywell yezinto zakho zexabiso ezilingana neelaptops ezili-15”.
Zonke izixhobo zokukhanya ezisemgangathweni kunye nezibane kwizitshixo eziluzizi kuquka nezibane zebalcony ye-lanai.
-Samsung 42" LCD TV
-10Mbps FAST akukho password WIFI nge Apple Airport Extreme Router
-Ipakethe yeGolide yeSkyCable + ZONKE iziteshi zeHD kunye neDVR eneefilimu ezirekhodiweyo.
-I-Aircon kwiGumbi lokuHlala kunye ne-Quiet Split Aircon kwigumbi lokulala, zombini ezinendawo ezikude.
- Igumbi lokuhlambela - ishawari yemvula, isomisi seenwele, ishawari eshushu / ebandayo.
-Ifriji enkulu yeFishel Paykel eStainless, iLa Germania Stove ene-oveni yokuhambisa kunye nehood, iMicrowave yeSamsung, amanzi ahluziweyo etephuni, itoaster, isiphekepheke serayisi, iayini enebhodi yoku-ayina, kunye nesixhobo sokufudumeza samanzi esakhelwe ngaphakathi.
Ironclad Cookware, Cutlery, Gordon Ramsey stoneware, izitya, iimathi zokubeka, ibhiya kunye nezivuli zewayini kunye nespatula, iigrater zetshizi, iwhisk kunye nonikezelo olungenasiphelo lwamanzi ahluziweyo kunye neekharafu ezi-5 ezizaliswe ngamanzi efrijini.
Ubalo oluphezulu lwentambo ye-COSCO yokundwendwela iilinen ezivela e-USA.
Ukuba kukho into oyiphosayo, ndixelele ukuba ndikubonelele! :)
Amakhethini asemgangathweni kuzo zonke iifestile.
Imirhumo kunye nezinto eziluncedo zonke zibandakanyiwe.
Isepha yesitya, isipontshi, isepha yesandla, isepha yebha, ishampoo kunye ne-conditioner zibonelelwa.
Inkonzo yokuhlamba iimpahla iyabonelelwa kwiSakhiwo.
Sikwabonelela ngesiselo esamkelekileyo ekufikeni kwethu kunye nesitokhwe efrijini ngeti ye-ice engafakwanga (iswekile ukungcamla).
Ndinikezela ngenkonzo yokucoca encomekayo kube kanye ngokuhlala ubusuku obu-4, kwaye kabini ngeveki ngokuhlala ixesha elide!
4.90 out of 5 stars from 654 reviews
4.90 · Izimvo eziyi-654
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi654
IPoblacion yeyona ndawo indala yaseMakati. Yonke into ikumgama olula wokuhamba. Oko kuquka i-wining kunye nokutya e-Dr. Wine, i-BBQ kwi-Holy Smokes, kunye ne-bar bar yezemidlalo yase-Manila, i-Howzat, kunye ne-Rockwell PowerPlant Mall kunye ne-Century City Mall kunye nee-cafes ezininzi. Bukela ubomi bokwenyani bakwiiPhilippines buhamba kwibalcony okanye uhambe uye kwindawo osiya kuyo yonke imihla. Yonwabela indlela esecaleni kwendlela esuka eRockwell Drive ukuya kwiPowerplant Mall. Fumana iisuti ezenziweyo okanye ezithungwayo eCornell Tailors.
Uya kwamkeleka! Ndihlala kude kwaye ndiza kufumaneka ukuba ndidibane kwaye ndinike isikhokelo sasekhaya emva kwentsimbi yesi-5pm ngeentsuku zokusebenza ngoMvulo ukuya kuLwesihlanu, kunye nangaliphi na ixesha ngoMgqibelo okanye ngeCawa. Ngexesha lomsebenzi ndinomhlobo olungileyo waseFilipina onokudlula kwaye akwamkele ukuba ndisemsebenzini. Sijonge ukudibana nawe kwaye sikwamkele kwiiPhilippines. Senze umzamo onyanisekileyo wokubonelela ngendawo yokuhlala ethandekayo kwaye ukwaneliseka kweendwendwe yeyona nto iphambili kuthi! Ndingumamkeli omtsha kwa-Airbnb kwaye ndinomdla wokudibana nabantu nokuva amabali abo ehlabathini lonke kunye nokumamela ingxelo yakho ngeenkcukacha eziya kwenza ukuhlala kwakho ukonwabe ngakumbi. Ndingumamkeli zindwendwe kodwa osabelayo okulungeleyo ukuncokola kodwa kwangaxeshanye qonda ukuba ukhetha ukuba nezinto zakho zabucala.Mabuhay Pilipinas!
Uya kwamkeleka! Ndihlala kude kwaye ndiza kufumaneka ukuba ndidibane kwaye ndinike isikhokelo sasekhaya emva kwentsimbi yesi-5pm ngeentsuku zokusebenza ngoMvulo ukuya kuLwesihlanu,…